Zvepabonde-chiremba, Lamar Odom, l - TELES RELAY
HOME » VANHU & VANHU Zvepabonde-mupengo, Lamar Odom, l
Zvepabonde-mupengo, Lamar Odom, l
Kuvanzika kwakavanzika ... The 27 September 2009, Khloe Kardashian, kubudirira kwechokwadi nyanzvi yeTV, uye Lamar Odom, mutambi anozivikanwa weNBAmhete yacho yakaenda pamunwe. Kutanga kwehukama iyo ichagara makore mana kusvika pakurambana kwemabhiri maviri e rudo, muna December 2013. Makore apfuura uye Lamar Odom akasarudza kudzoka zvakare rudo rwake rwekare rwenhau, uye nezvimwe zvakawanda, mune imwe nhoroondo yakanyorwa Rima kune chiedza (iyo inogona kushandurwa se "Kubva pamumvuri kusvika kuchiedza").
Yakabvunzwa nemagazini vanhu nokuda kwekusimudzirwa kwebhuku rake, iye anorondedzera kubva kwake kugehena uye anovimbisa zvaaiva nazvo "Dambudziko". Lamar Odom anotaura zvakajeka pazviri pachena kupindwa muropa kwake pabonde, uye zvinodhaka. "Ndakatengesa zvepabonde", anonyora uyo aimbova weLos Angeles Lakers mumitambo yake. Mutambi wacho anotsanangura kuva "Kufungidzirwa nepabonde nokusingaperi". Chimwe chinhu chakadai se basketball player inonzi iine zvepabonde nevakadzi vanopfuura 2.000. "Paiva nevanopfura kupfuura ini ndinogona kuverenga"anowedzera.
"Handina kukwanisa kudzora jira rinouraya revanhu vakakurumbira, kukanganisa, basa rekuderera uye kusavimbika. Ndakanga ndisingagoni kuchengeta jongwe rangu muhomwe yangu kana cocaine kubva mumhino dzangu. Zvinodhaka zvinodhaka zvinoshamisa kuti zvigadzirise tsika yavo. Ndakanga ndichida uye Khloe akanga achirega "iye anorwira. Nezvidimbu zvake, Lamar Odom akanyengedza mudzimai wake panguva iyoyo kakawanda. Kukuvara kwechiri kuraramasezvaanotsanangura mubhuku rake. "Izvo zvichonditora ini nhasi. Asi kuzvidemba ndizvo zvinhu zvatinofanira kudzidza kudzidza ne ", anovimbisa.
© Backgrid USA / Kushambadzira
Lamar Odom - Zvizvarwa zvinosvika paIGo.live party muLos Angeles munaJuly 26 2017
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.closermag.fr/people/sex-addict-lamar-odom-l-ex-de-khloe-kardashian-devoile-le-nombre-effarant-de-ses-970347
PHOTO. Nathalie Baye unveils an old cliché yaJohnny Hallyday naamai vake Huguette nemwanasikana wavo Laura Smet